Xog: Xasan Kheyre iyo Xasan Sheekh (Maxaad u baahan tahay inaad ogaato?) - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xasan Kheyre iyo Xasan Sheekh (Maxaad u baahan tahay inaad ogaato?)
Xog: Xasan Kheyre iyo Xasan Sheekh (Maxaad u baahan tahay inaad ogaato?)
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta xilka Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia u magacaabay Xasan Cali Kheyre.
Ra’isul wasaaraha xilkaasi loo magacaabay ayaa Siyaasad ahaan la sheegay inay aad isugu dhow yihiin Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Cali Kheyre waxa uu si dhow ula shaqeyn jiray Xasan Sheekh, waxaana lagu qiimeeyay inuu kamid ahaa la-taliyayaasha dhanka Hay’adaha Caalamiga waxa uuna si gaara u qiimeyn jiray taladiisa, isaga oo markii dambe ahaa madax ololaha doorashada Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uu sidoo kale Ra’isul wasaaraha inta ay wada shaqeynayeen uu kala tashan jiray arrimaha Shidaalka, Heshiisyada Hay’adaha ku lugta leh soo saarida shidaalka iyo waxyaabaha la halmaala Kheyraadka ku jira dhulkeena.
Ra’isul wasaaraha waxa uu si muuqata u aaminsan yahay fekerka Damul-Jadiid, walow Madaxweyne Farmaajo uu sheegay in isaga lagala xisaabtami doono dhibta uu la imaado Ra’isul wasaaraha uu magacaabay.
Ra’isul wasaaraha la magacaabay Xasan Cali Kheyre waxaa lagu yaqiinay Hawlaha Samafalka Aadminimadda, wuxuuna muddo dheer Madax ka ahaa Xafiis gobaleedka Golaha Qaxootiga Norway (NRC) ee Bariga Afrika, iyadoo mudada intaa dhan ay saaxiib dhow wada ahaayen Xasan Sheekh.
Xilka Dhaqdhaqaaqe Samafale ayuu ahaa tan iyo markii uu Dhalashadda dalka Norway qaatay, waxa uu haatan Shirkadda Soma Oil and Gas ee laga leeyahay dalka Britain ugu magacaaban yahay Wakiilkooda Bariga Afrika, isaga oo shirkaddaas ku leh saami ah 1.1%, una dhiganta 2 milyan oo dollar.
Dad badan ayaa tan ku macneeyey in Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo uu dib usoo nooleynayo Maamulkii uu talada kala wareegay, waxa ayna is weydiinayaan Xukuumada uu dhisi doono Ra’isul wasaaraha cusub oo ay macquul tahay inay kasoo dhex muuqdaan xubno kale oo aad ugu dhow Xasan Sheekh.
Dadku waxa ay sidoo kale hadal hayaan in Xasan Cali Kheyre uu yahay keliya Xasan Sheekh oo dhiig furan, balse inta kale ay wadaagan.
Kheyre ayaa waxaa ku fog tallo ka qaadashada Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud.
Magacaabistiisa ayaa la rumeysan yahay inay ku timid heshiis dhex maray Farmaajo iyo Xasan Sheekh, maadaama kooxda Xasan ay baarlamanka ku leeyihiin ku dhowaad 100 xildhibaan. Waxaa sidoo kale arrintan gadaal ka riixay Fahad Yaasiin oo ah gacanyaraha koowaad eee Farmaajo.